3 qof oo ku dhaawacmay is rasaasayn maanta ka dhacday magaalada Buuhoodle. – Radio Daljir
3 qof oo ku dhaawacmay is rasaasayn maanta ka dhacday magaalada Buuhoodle.
Buuhoodle, Nov 02- Ugu yaraan saddex qof ayaa ku dhaawacmay iska-horimaad maanta ka dhacay magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn, taas oo lala xiriirinayaa qarxii shalay ka dhacay Laascaanood.
Iska-horimaadkaan sababay dhaawaca saddexda ruux, ayaa yimid kadib markii ciidan bileyska ah oo ka tirsan maamulka Soomaaliland ay weerareen guri ku yaalla magaalada Buuhoodle gurikaasi oo la sheegay in uu ku sugnaa nin sheegtay in ururkiisu ka danbeeyey qarixii shalay lagu dilay taliyihii ciidanka Soomaaliland ee gobolka Sool Col. Cismaan Yuusuf Nuur.
Ciidankaan ayaa la sheegay in ay doonayeen in ay qabtaan ninkaasi oo lagu magacaabo Buraale Yuusuf Waris, hase yeesheen ilaaladii waardiyeynaysay ninkaasi ayaa la sheegay in ay la dagaallameen ciidankai taas oo suurto galisay in lagu guul darraysto qabashadiisa, waxaana wararku intaas ku darayaa in ay jireen dad shacab ah oo gacan siinayey Buraale iyo ilaaladii waardiyeynaysay xilligii is rasaasayntu ay socotay.
Ciidankii ka tirsanaa maamulka Soomaaliland ee weeraray guriga la sheegay in uu ku sugnaa Buraale Yuusuf Waris oo isagu shalay sheegtay in ururkiisu ka danbeeyey qarixii laascaanood, ayaa la tilmaamayaa in magaalada laga saaray, mana cadda khasaaraha kala gaaray labada dhinac ee is rasaasaynta dhax martay.
Muddo nus saac ah, ayaa si xooggan gudaha magaalada Buuhoodle looga maqlayey dhawaqa rasaasta labada dhinac ay is weydaarsanyeen, waxaana dadka dhaawacood la xaqiijiyey qaarkood la tilmaamay in ay ahaayeen carruur iskuullay ah oo xilligaasi ka agdhawaa goobta ay wax ka dhaceen.
Xaaladda magaalada Buuhoodle ayaa haatan la sheegayaa in ay tahay mid deggan, waxaana socda dadaallo nabdeed oo ay ku howllan yihiin duqawda dhaqanka ee gobolkaasi Cayn.